VALS (De Cagno, Gaspary neMantione) - Ongororo | Kufungisisa Kudzidziswa
Kwayedza yedyslesia uye chiperengo kuvanhu vakuru
Autori: Anna Giulia De Cagno, Kinga Gaspary naSolène Mantione
Nzvimbo dzinoongorora: kuverenga, kunyora, kufananidzira, ndangariro uye kugona kutarisisa
Zera renji: 18 - 70 makore
Ruzivo rwepfungwa. Mabasa ekuparadzanisa uye phonemic synthesis umo chidzidzo chinobvunzwa kupaza izwi mune ruzha kana, asi, kuridzorera nekuteerera kune mamwe manzwi (semuenzaniso, mushure mekuteerera "DOG" nyaya yacho inofanira kuti "C - A - N - E "kana zvinopesana).
Automated nekukurumidza kudana mazita. Basa umo chidzidzo chinobvunzwa kuti chikurumidze kutumidza mazwi nehupamhi hwekushandisa pane inoonekwa mharidzo.
Kuverenga mazwi uye asiri mazwi. Rondedzero yemazwi makumi maviri uye makumi maviri-asiri-mazwi anounzwa, kuti averengwe nekukurumidza sezvinobvira, kuitira kuti aongorore nzira yexxx uye inonzwisisika.
Kunzwisiswa kwemavara mune yakajeka kudzvinyirira. Musoro unofanirwa kuverenga nekuisa mumusoro chitsauko panguva yekutsikirira basa (uchidzokororazve syllable "la").
Kuverenga zvinyorwa. Rwiyo kuti uverenge nekukurumidza sezvinobvira.
Kudzvanywa nemashoko uye kutongwa neisiri-mazwi. Chinyorwa chinofanira kunyora mazwi anoverengwa kamwe chete nemuongorori.
Kududzirwa kwechinhu zvacho. Chidimbu chinoverengwa chose uye zvadaro chikamu chimwe chemitsara chinorinyora chinorondedzerwa chimwe panguva (chisingagoni kudzokororwa)
Kutarisisa kunooneka. Basa rechinyakare rekutsvaga iro rakananga mhando yekuvavarira mukati mevadzimu.
Kuongorora kwekutarisisa. Muongorori anoverenga runyorwa rwematsamba akateedzana izvo chidzidzo chinofanira kuteerera nebasa rekubaya chinyoreso patafura nguva dzese paanonzwa imwe yetsamba nhatu dzakanangwa dzakapihwa mukutakura.
Pakarepo kuyeuka kwemashoko. Musoro unoteerera kune runyorwa rwemazwi akaverengwa nemuongorori uye nekukurumidza anodzokorora akawanda seangarangarira.
Kunonoka kuyeuka kwemashoko. Kudzoreredzwa kwemashoko akambochengetwa mazwi.
Nhamba dze Span dzinotungamira uye dzakasiyana. Yakareba yakapfupi-yemashoko ekuyeuka ekuyeuka uye bvunzo dzebasa, zvakafanana neidzo dze BVN 5-11 and in the BVN 12-18.
Kuteerera kwekupanikira. Muongorori anoverenga runyorwa rwemitsara uye chidzidzo, kune chimwe nechimwe chazvo, chinofanira kuita sarudzo (ichokwadi / nhema) uye chengeta izwi rekupedzisira remutsara wega wega mundangariro.
La MAHARA inoita se kupera kwechisikigo kwazvino kushandiswa kuverenga uye kunyora bvunzo kuongorora uhu hunyanzvi muzera rechikoro.
Kusiyana nemabhatiri anoshandiswa zvakanyanya, inosanganisira bvunzo kuongorora mamwe matunhu anowanzo farira hurema hwekudzidza (fananidzo, kuyeuka uye kutarisisa).
Zvinoenderana nezvakataurwa mubhuku racho, bvunzo dzese dzineyakakwirira yakatarwa (kubva padiki 93% kusvika pakakwirira ye100%), zvichiita kuti zvisazoita kuti akajairwa nenzira isiriyo aongororwe zvisizvo kana dyslexic kana dysorthograph.
Kuenzaniswa nemamwe mabhatiri ane mutengo wakanyanya zvimwe gutsikana.
Yekutanga macroscopic kutsoropodza kwe MAHARA zvine chekuita ne kumira kwakasimba: 200 chete zvidzidzo zvezera rakakura kwazvo (kubva pamakore gumi nemasere kusvika makumi manomwe!).
Mune mamwe mazera mapoka iyo mhando yakaumbwa nevanhu vashoma kwazvo (dzimwe nguva 8!) uye izvi zvinogona kukonzera matambudziko mazhinji mukududzirwa kwezvibodzwa: kana kune kumwe kuyedzwa kwebhatiri, sezvakataurwa nevanyori, zera rakanga risiri chinhu chakakodzera mukuita, kweimwe bvunzo dzakapihwa nebhatiri rimwe chete. kuita kunoshanduka zvinoenderana nezera. Vanyori vacho pachavo vanokoka kungwarira kwakanyanya mukududzirwa kwezvimwe zvibodzwa, pamwe nehunhu pane kuyera kuwanda (izvo zvinofanirwa kubvumidza kuyedzwa).
Hapana bvunzo ine kukwirira kwakanyanya: inotangira pamakumi manomwe ezviuru kusvika pamazana manomwe kubva muzana, izvo, zvichishandurwa mumitemo inoshanda, zvinoreva mukana wakakura wekuti dyslexic isazozivikanwa nebhatiri iri.
Humwe humbowo hunovimbika yemafambisirwo ehutongi anofungidzirwa: yekuyera kuongorora bvunzo, semuenzaniso, hapana odhiyo faira yekuteerera kune zvinonzwika zvinokwezva asi iye bvunzo iye anofanira kuverenga runyorwa rwemazwi, achivimbisa kuti mhedzisiro iri zvinonzwisisika zvinokanganiswa nenzira dzakasiyana dzehutongi pakati pevaongorori vakasiyana (bhuku racho haritomboratidzi kuti inguva yakadii inofanira kupfuura pakati pekuverengwa kwezwi rimwe nerimwe!).
Mune zvimwe zviitiko zvinoratidzika kusava nechokwadi kwekubvumika kwemuyedzo (zvirinani kumeso): iyo 'Kunzwisisika mukutsikirira kudzvinyirira' bvunzo ndeyechokwadi muyedzo wekurangarira pane yakanyorwa, saka kana iri mamakisi mashoma zvinova zvakaoma kuona kuti izvi zvinoenderana nekushomeka kwekunzwisisa kwemavara kana episodic memory.
La MAHARA inomirira bhatiri ne vamwe kunaka asi zvakare kukanganisa kukuru. Inogona kuva imwechete adjuential chishandiso mukuongororwa kwevanofungidzirwa DSA mune vakuru asi inoda kutsigirwa nemamwe maturusi uye yambiro yakawanda mukududzira zvibodzwa.
Muchidimbu, inogona kutsanangurwa sehafu-yakabudirira bhatiri: sarudzo yakanaka yemiyedzo asi isina kukwana calibration iyo inoderedza zvakanyanya kuvimbika kwemhedzisiro.
Next Kuchenjerera uye kuisa pfungwa - Ongororo "
pashure «Mahara zviwanikwa zvekudzidza kuwedzeredza matafura
Tags: vakurudyslexiadyslexia yakuradysorthographydysorthography yevakurudsadsldyslexia bvunzovakuru dyslexia bvunzodysorthography bvunzomukuru dysorthography bvunzo
Dyslexia bvunzo (yemahara uye yakabhadharwa) yakakamurwa nezera
Mumakore apfuura takaona kuburitswa kwemiedzo mitsva yekuongorora kuverenga, kunyanya ...
Mavhiki e2 apfuura
1 mwedzi wapfuura
Usati watanga: musi wa18 na19 Gunyana pachave nechinyorwa chinotevera che ...